ဟုန်ပေါင်း (ခေါ်) အနီရောင်စာအိတ် ဆိုတာ… - For Her Myanmar
ဟုန်ပေါင်း (ခေါ်) အနီရောင်စာအိတ် ဆိုတာ…
February 9, 2018 by Hnin Ei Oo
အန်ပေါင်းကျတောင်းတတ်ပြီး သူ့အကြောင်းမသိထားရင် မခက်ဘူးလား?
တရုတ်နှစ်ကူးနီးပြီကွ။ ဘရေ့ရော်ဆပ် တရုတ်ယောင်းယောင်းများ။ မုန့်ဖိုးများအာခမ်းမင်း (အများကြီးရရင် နှင်းကိုလဲနည်းနည်းခွဲပေးနော် :P) အဲ့တော့ မြန်မာအခေါ် အန်ပေါင်း(An-pao) ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ? ဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတာလဲ? ဘာလို့ပေးကြတာလဲ? ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူ့ကိုပေးရတာလဲ? စသည်ဖြင့်ကို အက်မင်တရုတ်မက ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးသွားမှာပါ။
ဟုန်ပေါင်းဆိုတာလေ ကျန်းမာပြီးကံကောင်းအောင်ပေးတာ ယောင်းတို့ရဲ့။ နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာပြီး အနာရောဂါကင်းပါစေဆိုတဲ့ အတိတ်နိမိတ်နဲ့ပေါ့။ အပြင်က စာအိတ်အနီက အရေးကြီးတာ အထဲပိုက်ဆံကိုမကြည့်ရပါဘူး။ (တို့ကတော့ တို့ကတော့ လာပေးရင်အထဲလေးကိုချောင်းရမှ :P)။ စုံဂဏန်းထည့်ထားတဲ့ နှစ်ထုပ်ပေးရပြီး (၄) ဂဏန်းရှောင်ရပါတယ်။ (မဂဏန်းက အသုဘစသည်ဖြင့်မှာ သုံးတာပါ။) ဟုန်ပေါင်းကို နှစ်သစ်ကူးမှမဟုတ်ဘဲ မင်္ဂလာပွဲတွေမှာရော၊ မွေးနေ့ပွဲတွေမှာရော၊ တခြားချီးမြှင့်မှုတွေမှာလဲသုံးပါသေးတယ်။ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာတော့ လက်ထပ်ပြီးသားလူတွေက လက်မထပ်ရသေးတဲ့လူတွေ၊ ကလေးတွေကိုပေးပြီး တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာကျတော့ သက်ကြီးပိုင်းတွေက အသက် ၃၀ အောက်လူငယ်တွေကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ အထက်အရာရှိက အိမ်ထောင်နဲ့ဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင်မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ရိုးရာအနေနဲ့ပေးတတ်ကြပါတယ်။
Related Article >>> အစာစားနေတုန်း မဖတ်ရ 😛
ဟုန်ပေါင်းရဲ့ရာဇဝင်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက တစ်ခုကို နှင်းက ပြောပြမယ်နော်.. ဟိုးအရင်တုန်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ရွာတစ်ရွာမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင် အရမ်းသောင်းကျန်းခဲ့ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးက ကလေးလေးတွေကို အဓိကပစ်မှတ်ထားပြီး ဖမ်းစားတာပေါ့။ ညဘက်တွေမှာဆိုရင် တံခါးကိုအလုံပိတ်ပြီး မိဘရင်ခွင်ထဲထားပေမယ့် မရရတဲ့နည်းနဲ့လာပြီး ကလေးတွေရဲ့ဦးခေါင်းကို ကိုင်သွားတာမို့ နာမကျန်းဖြစ်တာတွေ၊ အသက်သေဆုံးတာတွေပါရှိလာလို့ တစ်ရွာလုံးကလဲ အရမ်းကြောက်နေကြရော။ တစ်နေ့မှာ အဲ့ရွာကစုံတွဲတစ်တွဲ ကလေးမွေးတော့ သူတို့ရဲ့ကလေးကို မကောင်းဆိုးဝါးကလာဖမ်းစားမှာဆိုးလို့ နတ်ဘုရားဆီကို အစောင့်အရှောက်တွေပို့ပေးဖို့ ဆုပန်လိုက်ကြတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ နတ်ဘုရားကလဲ နတ်သား (၈) ယောက်ကို အစောင့်အရှောက်အနေနဲ့ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အစောင့်အရှောက်တွေကလည်း မကောင်းဆိုးဝါးကို လှည့်စားဖို့အတွက် အနီရောင်ကြိုးနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ အကြွေစိလေးတွေအဖြစ် သဏ္ဍန်ပြောင်းပြီး ကလေးရဲ့ဦးခေါင်းရင်းမှာ စောင့်ရှောက်နေရော။ ညဘက်ကျ မကောင်းဆိုးဝါးကြီးရောက်လာတဲ့အခါ အကြွေစေ့ကနေပြန်လာတဲ့အလင်းကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်တဲ့အခါ လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားသတဲ့။ ဒီအကြောင်းကိုတစ်ရွာလုံးသိတဲ့အခါ တစ်ရွာလုံးကအိမ်တွေရဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်ခြမ်းမှာ အနီရောင်ကြိုးနဲ့အကြွေလေးတွေ ချိတ်လိုက်ကြရောတဲ့။ အဲ့အချိန်ကစပြီး မကောင်းဆိုးရွားရဲ့ရန်က လွတ်သွားကြတာပေါ့။ အဲ့အချိန်ကစပြီး နွေဦးပေါက် မကောင်းဆိုးဝါးလာတတ်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးတွေကို အကြွေစေ့လေးတွေနဲ့ အနီရောင်ကြိုးလေးတွေပေးကြရာက တဖြည်းဖြည်းခေတ်တွေ ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ အနီရောင်စာအိတ်နဲ့ ငွေစက္ကူပိုက်ဆံတွေဖြစ်လာတာတဲ့။ ခုဆိုပိုတောင်ခေတ်မီသေး wechat လို့ခေါ်တဲ့ mobile app တစ်ခုကနေ လွှဲလို့ရနေပြီ။ (နယ်ဝေးနေလို့ဂျင်းထည့်ခံရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်သွားတာပေါ့ :P)
တရုတ်နှစ်ကူးကျရင် ဘိုးဘေးတွေကိုကန်တော့ကြတာ၊ ခြင်္သေ့နဂါးတွေကပွဲတွေ၊ စသည်ဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်။ တရုတ်တန်းမှာလဲ မီးပုံးတွေနဲ့ အများကြီးအလှဆင်ထားပြီး ကပွဲတွေလဲကျင်းပဦးမှာမို့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း တရုတ်ရိုးရာပကအလှလေးတွေကို လာခံစားကြည့်ပါဦးလဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။
公西垡蔡 (Gong Xi Fa Cai = Happy New Year) ပါယောင်းတို့ရေ။ နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Reference: Hong Bao , Red Envelope
Tags: chinese_new_year, Fun, hong_bao, Knowledge